काठमाडौं । विद्युतीय गाडीको क्रेज बढ्दै गएको समयमा सरकारले करका दरमा वृद्धि गरेसँगै क्रेता र बिक्रेता दुबैमा अन्योलता सृजना भएको छ । विश्वभर सरकारले विद्युतीय गाडीमा अनुदान दिएर मानिसलाई विद्युतीय कार रोज्न लोभ्याइरहेको सममा नेपाल सरकारले विद्युतीय गाडी धेरै मानिसले किने भनेर कर बढायो ।
यस्तोमा अहिले नेपालमा विद्युतीय गाडी किन्ने मानिसको मनमा थुप्रै दुविधा रहेको पाइन्छ । के अहिले विद्युतीय कार किन्ने सहि समय हो ? विद्युतीय गाडी कत्तिको भरपर्दो रहेको छ ? आफ्नो आवश्यकता यस्ता गाडीले पुरा गर्न सक्छन् ? जस्ता सामान्य प्रश्न धेरै ग्राहकमा पाउने गरिन्छ ।
विद्युतीय गाडीमा पछिल्लो दुई वर्ष नेपालको लागि स्वर्णयुग जस्तै थियो । पछिल्ला दुई वर्षमा करिब १ हजार यूनिट इलेक्ट्रीक कार बिक्री हुनै आफैँमा उत्शाहजनक विषय थियो । गाडी बिक्रेता कम्पनीहरुले पनि देशका विभिन्न भागमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरेका थिए । उनिहरुले थप स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा लगानी गर्दै थिए । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले पनि चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा चासो देखाएको थियो । चौतर्फि इलेक्ट्रीक कारको माहोल बन्दै गरेको देखेर सरकारको आँखा लाग्यो । एकाएक बढेको करले इलेक्ट्रीक कारको आयात ठप्प भयो ।
अहिले पनि नेपाल आउने क्रममा रहेका (एलसी खोलिसकेका) विद्युतीय कार करिब ३ सय ५५ यूनिट रहेको छ । तर, बिक्रेता कम्पनीमा ती गाडी नेपाल ल्याएर बिक्री गर्न सक्ने आत्मवल जुटेको छैन । चौतर्फि विरोधपछि मन्त्रीपरिषद्ले विद्युतीय कारमा लगाइएको अन्तःशुल्कमा केही छुटको घोषणा गर्यो । त्यसले मात्रैपनि गाडी बिक्री हुन्छ भन्ने बिक्रेताहरुलाई लागेको छैन । जेठ १५ अघि ५५ लाखमा बिक्री हुँदै आएको कार अब ७५ लाखभन्दा बढी मूल्यमा ग्राहकले खरिद गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने अन्योलता बिक्रेतामा पाइन्छ भने जेठमा ५५ लाखको गाडी अहिले ७५ लाख किन तिर्ने भन्ने ग्राहकको भनाई रहेको छ ।
ग्राहकको सबैभन्दा ठूलो दुविधा चार्जिङ स्टेशनको अभावले आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ वा सकिदैन भन्ने चिन्ता रहेको छ । साथै घर भाडामा वस्ने मानिसले पनि यसलाई झन्झटिलो मान्दै आएका छन् । घरमा चार्जिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउनै कठिन हुने धेरैको तर्क रहेको पाइन्छ ।
लामो यात्रामा गाडी लिएर निस्कनेहरुको रोजाइमा पनि विद्युतीय कार पर्दैनन् । उनिहरु आफ्नो यात्रामा गाडी चार्जको तनाव लिन चाहँदैनन् । त्यसैले उनिहरु पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने कारनै किन्न रुचाउँछन् ।
विद्युतीय कार किन्ने अधिकांश मानिस अहिलेपनि वातावरण प्रति सचेत वर्गका रहेका छन् । उनिहरु वातावरणमा पनि केही सहयोग गर्न सकिने, आवाज नआउने, हाइटेक प्रविधिको प्रयोग गर्न पाइने जस्ता कारण बिद्युतीय कार रोज्ने गरेका छन् ।
तुलनात्मक रुपमा सस्तो संचालन खर्च, सर्भिसमा गर्ने खर्च कम हुने र आफ्नै देशमा उतपादन भएको विद्युतबाट गाडी चार्ज गर्न सकिने जस्ता कारण उनिहरु विद्युतीय गाडी किन्न चाहन्छन् ।
Categories Select Category Auto (492) Blog (3) English (1,173) Entertainment (586) Finance (1,098) Nepali (12,134) Sports (8,071) Tech (2,140) World (4,010)